Ogaden News Agency (ONA) – Xulafada Sacuudiga oo Weeraray Garoonka Xudaydah.
Xulafada Sacuudiga oo Weeraray Garoonka Xudaydah.
Ciidamada dowladda Yemen ee Sacuudigu ay tagaeeraan ayaa weerar culus shalay ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada mucaaradku ay haystaan ee Xudeyda.
Dad goobjoogeyaal ah ayaa sheegay in weerarka la fuliyey, ayada oo ciidamada ay taageero ka helayaan duqeymo xooggan oo lala beegsaday fadhiisimaha maliishiyada Xuutiyiinta ee gacanta ku haysta garoonka caalamiga ah ee magaalada Xudaydah.
Toddobaadkii tagey ayaa isbaheysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo waxay billaabeen weerar cirka iyo gantaalo ah oo ka dhan ah mucaaradka Xuutiyiinta ee dawlada Iran ay taageerto, ayaga oo isku dayaya inay ka saaraan mucaaradka oo magaalada Xudeyda maamulayey labadii sano ee lasoo dhaafay.
Dekadda magaalada Xudeyda ayaa muhiim u ah dhaqaalaha dalka Yemen, waxaana laga soo dejiyaaa 70% dhammaan badeecadaha yimaada dalkaas. Sacuudiga ayaa ku eedeeyey Xuutiyiinta inay dekadaas u adeegsadaan in ay kasoo dejiyaan gantaalo kadibna ay ku weeraraan dhulka Sacuudiga.